Xubno lagasaaray gudigii lagu murunsanaa ee doorashooyinka - Awdinle Online
Xubno lagasaaray gudigii lagu murunsanaa ee doorashooyinka
Guddigii uu ra’iisul wasaaraha Soomaaliya u saaray xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo mid dawlad goboleedba ayaa saacado ka hor shaaciyay in 34 xubnood laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka ee heerarkoodu uu kala duwan yahay.
Arrintaasi ayuu guddigu sheegay inay ku timid kaddib baaritaan dheer oo ay ku sameeyeen xubnaha laga cabanayay oo markii hore gaarayay 67 qof.
Wasiir ku xigeenka Warfaahinta Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in Maalmo dedaal dheer ay bixiyeen wadatashi balaaran ay sameeyeen isticmaalnay dhamaan aalladihii ay heli kareen suurtagalna ka dhigi lahaa in la kala ogaado cabashooyinkii la xiriiray guddiyada saddexda qaybood ah ee hirgalinta doorashada guddiga heer federal & guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga heer mamaul goballeed ay suurta gashay in ay soo gabagabeeyaan kala saarista iyo kala hubintii Guddiyada ayna ku guuleysteen.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda xilgaarsiinta oo ah Guddoomiyaha Gudiga ayaa sheegay in muddo 48 saacadood gudahood ah la keeni doono Xubnihii bedeli lahaa, si tababar loogu furo doorashadana u bilaabato.
Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ayaa dhawaan Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxaa ay u gudbiyeen liiska 67 Xubnood oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin, NISA, Shaqaalaha dowladda & taageerayaasha Farmaajo, balse 34 Xubnood oo ka mid ah meesha laga saaray.
Previous articleCiidamadii ugu badnaa oo la geeyay Galmudug & xaalada…..
Next articleAMISOM oo bayaan kasoo saartay Duqeymaha ciidamada Kenya ka geysteen Gobolka Gedo